Download Music Site Yotube na nrụọrụ ka PC / Mac
Download Music Site Yotube / nrụọrụ ka PC / Mac
Nzọụkwụ 1: Download Site Yotube / weebụsaịtị ka iTunes
Mbụ ị mkpa ibudata songs si YouTube / weebụsaịtị gị iTunes Ọbá akwụkwọ na n'ihi na nke a ị pụrụ ịtụnye guide- Site YouTube / weebụsaịtị ka iTunes
Nzọụkwụ 2: Chọta ebudatara songs
Ugbu a ị chọrọ na-akpa-ahụ ndepụta nke ebudatara songs nke-aga n'aka ekpe n'akụkụ menu na n'okpuru iTunes Library họrọ "Na nhọrọ". A ndepụta nke songs ga-apụta site na nke họrọ ndị na ị chọrọ nyefee. (screenshot egosi 1 họrọ song-ide Space).
Nzọụkwụ 3: Mbupụ na PC / Mac
Ugbu a n'elu menu nke TunesGo, na-aga "Export" nhọrọ na n'ebe họrọ "Mbupụ na kọmputa m" nhọrọ.
Ugbu a họrọ nchekwa na PC gị na / Mac ebe ị chọrọ music faịlụ ga-azọpụta. (screenshot-egosi "My music" dị ka họrọ nchekwa)
Ke ọma bupu, a ozi na-egosi Export ịga nke ọma ga-apụta.
Ọzọ: Record Music Site Spotify / gụgharia ka iTunes